अष्ट्रेलियाको सफल व्यबसायी हरि पोख्रेल सँगकाे अन्तर्वाता - Nepali Times Australia :: The First Nepali Magazine Published in Australia
अष्ट्रेलियाको सफल व्यबसायी हरि पोख्रेल सँगकाे अन्तर्वाता
नेपालको बिराटनगर स्थाई ठेगाना भए पनि झापाको गौरदहमा आफ्नो बाल्यकाल बिताएका हरि पोख्रेल यति बेला अष्ट्रेलियाको सफल व्यबसायीमा पर्छन् । आज भन्दा २० बर्ष अगाडि विद्यार्थीको रुपमा अष्ट्रेलिया आए । अन्य नेपाली बिद्यार्थीहरू जस्तै उनका पनि जीबन भोगाइ र सिकाइका फेहरिस्ता छन् । कुनै बेला एकाउटेण्ट बन्ने सपनालाई साकार पार्न एसआइबिटि कलेजबाट डिप्लोमा अफ एकाउण्टि· त्यसपछि मक्कवारी युनिभर्सिटीबाट ब्याचलर इन एकाउण्टि· डिग्रि लिएका पोख्रलले कालान्तर आफुलाई माइग्रेसन एजेन्टको रुपमा समेत उभ्याए । यस बीचमा पोख्रेलले भिक्टोरिया युनिभर्सिटीबाट ‘माइग्रेसन ल’ मा ग्रेजुयट सर्टिफिकेट र युनिभर्सिटी अफ न्यु इंगल्याण्डबाट मास्टर इन कमर्ससम्म अध्ययन पूरा गरे । सन राईज वान स्टप सप जस्तो बनेर एकाउण्टि·, फाईनान्स, शैक्षिक परामर्शदाता र माईग्रेसन एजेन्टको रुपमा धेरैलाई सेवा पुराउँदै आएका पोख्रेल सिड्नीको हर्नस्बी हाईटमा ३ छोरा/छोरी र श्रीमती सहित बस्दै आएका छन् । व्यवसायमा लाग्नु अगाडि वेस्टर्न सिड्नी टेफ, साउथर्न टेफ र सिड्नी वाटरमा जागिरे जीबनको अनुभब लिइ सकेका मिलनसार स्पष्टबक्ता सन् राईजका निर्देशक उनै पोख्रेल संग द नेपाली टाईम्स अष्ट्रेलियाको बिज टकका लागि छोटो कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ कुराकानीको संक्षेप ।
तपाइँको व्यसायको बारेमा केहि बताई दिनुस न ?
म यति बेला माइग्रेसन, एजुकेसन र एकाउण्टि∙ सेवा पुराउने व्यवसाय मा आबद्द छु । यसका लागि माइग्रेसनका लागि :ब्च्ब् ७ :क्ष्ब् र एकाउण्टि∙ र ट्याक्स रिटर्नका लागि अष्ट्रेलियन ट्यक्सेसन बोर्ड संग आबद्द छु । हाम्रो कम्पनी शैक्षिक परामर्श दाताको रुपमा समेत रजिस्टर्ड छ र हामी धेरै स्तरिय कलेज र युनिभर्सिटीका आधिकारिक प्रतिनिधि पनि हौं । प्राबिधिक (भोकेसनल) शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्मका कुनै पनि शैक्षिक परामर्शका लागि हामीले बिद्यार्थीहरू लाई तिनका आबश्यकता अनुसार सर सल्लाह सुझाब र सहयोग पुर्‍याउँदै आएका छौं । हाम्रो अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा र नेपालको काठमाडौंमा अनुभबी स्टाफ सहित को कार्यालय छ ।
मलाई माइग्रेसन सम्बन्धी कुराले संधै आकर्षण गर्थ्यो र अर्को तर्फ आफु नै बिद्यार्थी हुँदै सबै कुराको उतार चढाव भोगेको व्यक्ति परें । यो धेरै जनाको भविष्य संग जोडिएको बिषय पनि त हो । सानो गल्तिले सुधार्न नसकिने समस्या आइपर्ने भिसाको समस्या उच्च शिक्षाका कुरामा सहि सल्लाह सुझाब दिन सकौं भन्ने उद्देश्यले पनि मलाई यस क्षेत्रमा केहि गरांै भन्ने लाग्यो । यो आफैमा व्यवसाय हुँदा हुँदै पनि सामुदायिक कार्य पनि हो । त्यसैले पनि म आँफू संग आउने ग्राहकको समस्यामा गहिरिएर मात्र सल्लाह र सुझाब दिने गर्छु । त्यसैले पनि म यो व्यवसायमा सन्तुष्ट पनि छु ।
यो व्यवसायमा रहँदै गर्दा कस्ता किसिमका अबसर र चुनौती देख्दैहुनुहुन्छ र सामना गर्दै हुनुहुन्छ ?
अष्ट्रेलियन इमिग्रेसनका नियमहरू आफैमा कठिन छन् छिटो छिटो परिबर्तन र अपडेट भइ रहन्छन् । कति नियमहरू भिन्न अर्थ लाग्ने किसिमका या एक संग अर्को जेलिएका पनि हुन्छन् । त्यसैले निरन्तर स्व अध्ययन र यस संग आवश्यक पर्ने ट्रेनी∙हरू लिइरहनु अति आवश्यक छ । आफुले समस्याको गहिराहीमा पुगी इमिग्रेसनको नियममा आफ्नो क्लाईण्टको बस्तु स्थिति मिल्ने गरि आफुलाई संधै चनाखो राख्नु एउटा चुनौती हो । अर्को तर्फ धेरै पक्षबाट भए गरेका गल्तिहरूले धेरै कुराहरू उठेका हुन्छन् यसमा क्लाईण्टलाई आस्वस्त पार्न सक्नु पर्यो । सहुलियत सेवा शुल्क लिएर स्तरीय सेवाहरू दिन सक्नु पर्यो ।
अबको पाँच बर्षमा तपाईको व्यवसाय कहाँ पुग्ला ? हामीले हरि पोख्रेललाई अबको पाँच बर्षमा कहाँ देखौंला ?
निश्चय पनि अबको पाँच बर्षमा आफुलाई यस क्षेत्रमा अझ दक्ष बनाउँदै अष्ट्रेलियाका अन्य शहरहरूमा पनि हाम्रो कार्यालयहरू हुनेछन् । त्यसै गरि नेपालमा पनि लगभग सबै प्रमुख शहरहरूमा हाम्रो कार्यलय स्थापना गरेर स्थानीय रुपमा नै सेवा प्रदान गर्नेछु । जसले निश्चय पनि हाम्रा अफिसमा कार्यरत दक्ष जनशक्तिहरूमा बढोत्तरी हुनेछ यसैको अनुपातमा हामीले धेरै भन्दा धेरै ग्राहकलाई सेवा पुराउने छांै ।
नेपाली समुदायमा व्यवसाय गर्न चाहनेहरूलाई तपाई कस्ता सुझाब दिन चाहनुहुन्छ ?
समुदायमा व्यवसाय बढ्नु आफैमा निक्कै राम्रो कुरा हो । गुणस्तरीय सेवामा कटिबद्द भएर कुनै पनि व्यवसायी आउँदा त्यसले स्वयं सेवाग्राहीलाई नै अझ बढी फाईदा हुन्छ भन्ने कुरामा बिस्वस्त छु । त्यसो भन्दै गर्दा गैरकानुनी या क्षणिक ट्याक/टुक मिलाउने खालको व्यवसाय नगर्न म यो व्यवसाय मात्र होइन सबै व्यवसायका साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु । जहिले पनि नयाँ अबसरको खोजि गर्ने आफुलाई संधै दक्ष बनाउन स्वअध्ययन गरि राख्ने सुझाब दिन्छु । अन्त्यमा अरुलाई खुसी बनाउन पहिला आफु खुसी हुनु जरुरी छ त्यसैले पनि, आफुले गरेको काम व्यवसायबाट पहिला आफु खुसी र सन्तुष्टि हुनु जरुरि छ ।